म आफूलाई एकदमै लक्की फिल गर्छु - सोविता सिम्खडा (नायिका) - फ्रन्टलाईन नेपाल
४ आश्विन २०७५, बिहीबार ११:४५ September 21, 2018 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
सोविता सिम्खडाको पहिचान चलचित्र अभिनेत्रीका रुपमा सिमित थियो । उनले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारित ‘नमस्ते कलिउड’ कार्यक्रम दुई वर्ष चलाईन् । त्यस्तै झण्डै डेढ वर्ष डान्स कम्पिटिसनमा आधारित ‘सरोबर कार्यक्रम’ पनि चलाईन् । त्यो पनि नेपाल टेलिभिजनबाटै बज्थ्यो । ‘नमस्ते कलिउड’ कार्यक्रम चलाउँदा-चलाउँदै चलचित्रमा अभिनय गर्न पुगेकी सोविता यतिबेला उपन्यासकारका रुपमा उदाउँदैछिन् । ओशोबाट प्रभाबित सोविताको जीवन निकै सरल छ । उनलाई भेट्दा अन्य सेलिब्रेटीहरु जस्तो चमकधमक पटक्कै देखिदैन । बरु उनको सरल र सुन्दर जीवनबाट जोकोही प्रभाबित हुन्छन् । सोवितासँग फ्रन्टलाईन नेपालको कुराकानी
‘वराङ्गना’ पुस्तकको नाम कसरी जुर्‍यो ?
वराङ्गनाको अर्थ हुन्छ- सुन्दर स्त्री । जुन मेरो कथाको मुख्य पात्र हुन् । उनको नाम हो, जुनकिरी । उ असाध्यै राम्री छे । बाहिरी आवरण, सोच, उसका क्रियाकलाप सबै राम्रा छन् । बुबा र मैले यो नाम जुरायौं । सूरुमा बुबाले शब्दकोश हेरेर मलाई सोध्नुभयो, वराङ्गना नाम कस्तो छ भनेर । मलाई त ‘जुनकिरी’ नै राखौं कि जस्तो लागेको थियो । पछि यही नाम फाइनल भयो ।
‘वराङ्गना’ के विषयमा केन्द्रित छ ?
खासगरी ‘वराङ्गना’ दलित समुदायबाट निस्केकी केटी (जुनकिरी) को संघर्ष, प्रेममा बारेमा केन्द्रित छ । उ कतै हराईरहेकी छे । कसैसँग प्रेम भएपछिको संघर्ष, खानाको अभाब, पढ्नका लागी उसले गरेको दु:ख, पछि गएर उ राजनीतिमा जोडिन्छ । यसकै वरिपरी पुस्तक घुमेको छ ।
यो उपन्यास लेख्न कति समय लाग्यो ?
तीन वर्ष लाग्यो । मैले ८/९ पटक पुर्नलेखन गरें । सूरुमा ड्राफ्ट तयार पारें, पछि पुर्नलेखन गर्दा भने अलि समय लाग्यो । मुख्य कथा सुँइसुँइ लेखिन्छ । त्यसपछि गहिरिएर सोच्दा, कतिपय ठाउमा चित्त बुझ्दैन । त्यस्तो ठाउमा मिलाउन समय लाग्यो ।
लेख्न बस्दाका रोचक क्षणहरु के–के छन् ?
एकदम धेरै छन् । मैले बाहुनको छोरी हुँ भन्ने कुरा पनि भुलें । त्यो पात्रमा म आफै डुबें । लेख्दा–लेख्दै कति ठाउमा बरर आँशु खसे । त्यस्तो बेला आँखा चिम्म गर्थें । राती १/२ बजे पनि ममा छट्पटि भईरहन्थ्यो । कहिलेकाहीं त एक महिनासम्म पनि नलेखी बसें । कलम र कापीको सहारामा जे जति लेखियो, असाध्यै मजा आयो । बढीजसो विहान फ्रेस भएर ध्यान, योगा गरेपछि लेख्थें । बाटोमा हिंडिरहँदा, खाना खाईरहँदा मनमा कथाका अनेक प्लट आउँथे । कुनैबेला मैले मोबाइलमा रेकर्ड गर्थें । पछि त्यसलाई डायरीमा उतार्थें । पुस्तक लेखिरहदा मैले अरु लेखकका किताब पढिनँ । त्यसको फ्लेबर आउला कि भन्ने डर भयो ।
तपाईंले चलचित्रमा पनि काम गर्नुभयो । अहिले लेखनमा हात हाल्नुभयो । यि दुई बिधाबिच के फरक पाउनुभयो ?
लेख्न बस्दा आफ्नै मुडमा काम गर्न पाईन्छ । आफूसँग कापी र कलम छ भने जतिखेरै लेखे पनि भयो । तर चलचित्रमा काम गर्दा अर्काको मुड, इच्छा अनुसार काम गर्नुपर्छ । फेरी चलत्रिचमा निर्देशक, अरु कलाकारहरु हुन्छन्, उनीहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्‍यो । तर लेखनमा भने सबैथोक आफै हो । आफैमा रमाउन सकिन्छ ।
‘वराङ्गना’ कस्तो परिबेशमा बसेर लेख्नुभयो ?
मैले ओशो तपोवनमा लेखें । खुल्ला वातावरण, ध्यान गर्न पाईने भएकाले मैले तपोवन नै रोजें । कि आश्रम, कि कुटीमा बस्न म बढी रुचाउँछु । शान्त ठाउ, हरियालीमा बस्न एकदम मनपर्छ । त्यहा बसिरहँदा मैले किताब लेख्दै छु भनेर कहिल्यै, कसैलाई पनि भनेको थिईनँ । एकैचोटी सामाजिक सञ्जालमा मैले किताब लेखेको कुरा जानकारी गराएपछि सबैले अचम्म माने ।
तपाईंका प्रिय पुस्तकहरुको लिस्टमा कुन–कुन नाम छन् ?
ओशोका पुस्तक बाहेक बिपी कोइरालाको ‘सुम्निमा’, अमर न्यौपानेको ‘सेतो धरती’, शारदा शर्माको ‘ताप’, बुद्धिसागरको ‘कर्नाली ब्लुज’, पारिजातको ‘शिरिषको फूल’ ।
पढाइ, लेखाईका लागी घरपरिवारमा कस्तो माहोलमा थियो ?
धादिङमा हाम्रो ओशो आश्रम थियो । अहिले पनि छ । ४०/५० जना ध्यान गर्नेहरु नियमित हुन्थे । म बढीजसो आश्रममै हुर्कें । बुबाले नया पुस्तक पढ्न हौसला दिनुहुन्थ्यो । म छुट्टै माहोलमा हुर्कें । घरका सबै सदस्यहरु ओशो सन्यासी थिए । बुबाको संगत, पढ्ने बानी, त्यो छाप ममा पनि बस्यो । गाउका मानिसहरु पुस्तक माग्न हामीकहाँ नै आउँथे । पुस्तकसँग सानैमा संगत भयो । जसले गर्दा अहिले लेखनमा आउन सहयोग पुग्यो ।
एक पटक पुस्तक किन्दा कति खर्चिनुहुन्छ ?
आबश्यकताअनुसार पुस्तक किन्छु । ३ सय रुपैंयाँदेखी ३ हजार रुपैंयाँ , अझ त्यो भन्दा बढी खर्च गरेको छु । पुस्तक किन्दा मलाई रमाईलो नै लाग्छ । पछुतो लाग्दैन ।
तपाईको रुचि के-के मा छ ?
जे मन लाग्छ, त्यो गरिहाल्छु । रहर थन्क्याएर राख्दा साधनामा असर गर्छ । मानिसका चाहनाहरु कहिल्यै सकिदैनन् । असिमित हुन्छन् । त्यो त घटाउँदै जाने हो । चाहनाले सधैं सताईरहन्छ । जीवनमा आफैमा हराउनु, आफैलाई जगाउनु, आफैलाई खोज्ने गर्नुपर्छ । र, अरुका लागी पनि बाँच्नुपर्छ । अरुलाई खुसी दिन सक्नुपर्‍यो । ममा त्यो मान्यता छ ।
जीवन असाध्यै सुन्दर छ । त्यो त हरेकको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ । म त आफूलाई एकदमै ‘लक्की गर्ल’ ठान्छु । असाध्यै खुसी छु । मैले माछामासु कहिल्यै खाएको छैन । डिस्को, डान्स, र बार पनि छिरेको छैन । वाइन पिउने बानी छैन । तैपनि म धेरै नै खुसी छु । मलाई यति धेरै खुसी दिएकोमा भगवानप्रति धन्य छु ।
Tagged frontline nepal, narendra raule, nepald idol live, novel, sobhita simkhada, voice of nepal, अमर न्यौपानेको 'सेतो धरती', पारिजातको 'शिरिषको फूल', बिपी कोइरालाको 'सुम्निमा', बुद्धिसागरको 'कर्नाली ब्लुज', शारदा शर्माको 'ताप'
चुरे दोहन रोक्न माग
१६ माघ २०७६, बिहीबार ०९:३५ January 30, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं । १६ माघ । अत्यधिक दोहनका कारण चुरे विनाश भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । बुधबार यदुवंशी उत्थान समाज नेपालले आयोजन गरेको कार्यक्रमका सहभागीले तत्काल चुरे विनाश रोक्न पहल नगरे भयावह स्थिति निम्तिने खतरा रहेको औल्याए । पूर्व सहसचिव उमेश्वरनाथ गंगोलले देशभर चुरे विनाश बढ्दै गएकामा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । उहाँले चुरे […]
कांग्रेसले सत्तारुढ दललाई गरायो सचेत – वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई महाअभियोग लगाउने गल्ती नगरौं
७ आश्विन २०७५, आईतवार १०:०७ September 23, 2018 Binita Siwakoti
असोज ७,काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाअभियोग लगाउने गल्ती नगर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सचेत गराएको छ। आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले जोशीमाथि महाअभियोग लगाउन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले गोप्य रूपमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको चर्चा भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सांसद […]
च्याम्पियन्स लिग – म्यानचेस्टर सिटीको खराब सुरुवात , यूनाइटेडले निकाल्यो सहज जित
केशब पुरीको अध्यक्षतामा ‘पुम्से सेमिनार’ सम्पन्न